Ngakho namuhla sizobe sesibheka indlela ukuthola ngezwi yokuxhumana "VKontakte". Futhi kufanele kuqale yokuthi futhi unika "izwi" kumnikazi. Ngakho ake baqonde ukuthi yilokho.
Ngaphambi uthola ngezwi yokuxhumana "VKontakte" sizoqonda, kungani inkathazo yasungulwa le nto. Lena into ezithakazelisayo, okunikeza eziningi izinzuzo kumniniyo.
Eqinisweni, izwi - lwemali lokho okubizwa ngomlobokazi zokuxhumana. Wena wagqoka imali iphrofayela yakho, uthola ukubuya, "izwi", okungase ukukhokhela zonke izinhlobo izenzo ezengeziwe.
Uma ucabanga ukuthi ungathola kanjani izwi "VKontakte", kufanele ukulungele ukutshala. Kuyinto kulezi ukutshalwa kwezimali bese igcina indawo yonke, kanye imidlalo kanye nezinhlelo zokusebenza kuso. Ukuze amavoti ungakwazi ukunikeza isipho esikhethekile umngane, ukuthenga isethi yokuqala izithonjana, noma uzihlanganyele for lwemali kanzima imidlalo. Uma kungenjalo kabi, lo msebenzi bese kubhekwe ngempela ewusizo. Ngakho ake sibone indlela ukuze uthole amavoti namuhla yethu "zezenhlalakahle."
Ake uqale nge izinguqulo athembeke kakhulu ngokwethembeka imicimbi. Iqiniso lokuthi "VKontakte" has ithuba ashona akhawunti yabo iphrofayli. Ngale ndlela ungakwazi, futhi sebeqedile umbuzo: "Ngiyithola kanjani izwi? '
A "lwemali iyunithi" kubiza ruble mayelana 14. Hhayi isizumbulu kakhulu. Ngakho uma udinga ivoti 2-3 ke ungaya yikuphi ukugcina lokukhokha, lapho ukhetha eliqoshwe umbhalo othi "VKontakte", faka inombolo kwekhasi lakho (ubunikazi) futhi ubeke lemali edingekile of imali. Ngemva kwesikhathi esithile, uzokwazi ukusebenzisa amazwi.
Nokho, elikhulu Thenga ibhonasi, kulapho ufuna. Ngezinye izikhathi, imfucuza hhayi zakwazi ukwenza lokho okulindelwe. Kulapho abantu siqale ukucabanga nendlela ukuvota kungekho utshalomali yangempela. Eqinisweni, kwakungenzeka lokhu. Futhi akukho noyedwa. Manje thina simazi kangcono zonke izindlela ezingakhona.
Ucabanga mayelana nendlela uthole amavoti "VC" futhi musa phezulu i-akhawunti yakho? Khona-ke wena, kukhona nezaphulelo amasayithi.
Iya "izilungiselelo zami" futhi lapho ukhetha "Balance". Okulandelayo, cindezela "Get Free" bese ukhetha "Izipesheli". ewindini elisha uzovela phambi kwakho, ezovela imisebenzi kungenzeka okuyiwona ukusebenza uzothola ethile "lwemali".
Uma ucabanga ukuthi ukuvota "VC", ungazama le ndlela. Lapha ungathola ngokuphelele yimuphi umsebenzi: kusukela ukubhaliswa kusayithi ngaphambi kokuthenga esitolo online. Izimo zethu zihluke kakhulu umqondo ethandwa kuyinto ukudlala e isicelo kanye nokufeza zibe nempumelelo ethile kuwo. Indlela enhle, kodwa asihambisani kahle ezifisweni ezinkulu. Ingabe imisebenzi abe impahla ukuqeda. Bese siba kabusha ucabanga ukuthi ungathola kanjani izwi ngenxa yokuxhumana "VKontakte".
Manje lolu hlobo imali e-World Wide Web isibe zithandwa, futhi nsuku zonke bayanda likhula. Sikhuluma ukusetshenziswa izinhlelo akhethekile izicelo ezinikeza ukwenza imisebenzi emincane amavoti.
Musa ukudida le ndlela ne Uhlelo lobulungu. Indlela, manje sizoxoxa, iyona prototype yokukopela ohlelweni. Umenyiwe ubhalise isicelo (iwebhusayithi, uhlelo), abese ekhohlwa umbuzo, ukuthi ungathola kanjani izwi "VKontakte".
Ngenxa yalesi lwemali ukwenza imisebenzi elula. Okuthile sochungechunge: Thanda, amazwana, zingeze kwindawo ikhasi, alethe umuntu abangani nokunye. Ayikho into elukhuni. Futhi isikhathi sokuphishekela izinto ezinjalo ingaphezulu kakhulu ukukhithika. Into eyinhloko ukuba ukhethe isevisi enhle futhi lithembekile ngokomlando.
Futhi lapha kungenye, kodwa ngeshwa, simo ngempela ezithakazelisayo yokungathembeki. Iqiniso liwukuthi ngokuvamile umbuzo ngempela: "Umuntu angaba kanjani amavoti," abasebenzisi bazithole impendulo: ". Hack uhlelo futhi bakhohlise bebodwa" Ngakho ukuthi abanye bazama ukuze sihlakaniphele yokuxhumana nenkohliso ukuze uthole olucutshungulwayo "lwemali".
Ubani e -World Wide Web ungathola ezihlukahlukene izinhlelo ukunikela Hack "VKontakte" futhi bakhohlise izwi lakho. Ezinye zazo ziyasebenza ngempela. Nokho, bambalwa kakhulu zalezi. Uma unenhlanhla, ungakwazi empeleni ukuthola amavoti. Nokho, akufanele athole wathumba: nenkohliso kutholakala, futhi - ziyavalwa. Kungenzeka, ngaphandle kokuba nokwenzeka yokutakula kwekhasi. Futhi udinga ke?
Abantu abaningi nakudzingeka ukukhwabanisa yangempela. Ukucabanga ukuthi ungathola kanjani izwi "VKontakte", bayalibala mayelana nokuvikeleka idatha. Ngakho, lolu hlelo ungacela igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi. Ngemva isingeniso yabo ungaqiniseka ukuthi uzohlala ne iphrofayli atshontshiwe. Okuningi ngokunembile - ngaphandle kwakhe. Buyela ekhasini ngokwalo kuyoba nzima kakhulu. Ngakho, ngcono ukugwema nokugenca.
Ucabanga mayelana nendlela uthole amavoti ngaphandle izinhlelo kanye nokutshalwa? Khona-ke ungakwazi ukuthatha ngokugcwele inzuzo inkambo ezithakazelisayo - bahlanganyele imincintiswano ehlukahlukene poll, "VKontakte". Bavame kudlalwa amazwi.
Njengomthetho, izimo kufanelekile wonke umuntu. Ngokwesibonelo, ukubeka isithombe iholide lakho ngasolwandle, nezingane nokunye. Noma ukuba iqhaza emncintiswaneni the best "izithombe" nge umfanekiso inkampani umlingani. Ngemva kwesikhashana, uthola umphumela futhi umklomelo. Ngeshwa, umklomelo ngokuvamile izindawo ezintathu zokuqala kuphela.
Nokho, uma abanesifiso izindlela ngokwethembeka yomsebenzi amavoti ngaphandle nezinamathiselo, kufanele uzame. Yebo, akusiwona ngendlela esheshayo. Futhi hhayi lesifanele kakhulu. Kepha iqiniso.
Ngaphezu kwalokho, ngezinye izikhathi yokuxhumana amaqembu athile ubambe imibuthano amavoti iqhaza kulolu cwaningo. Into efana: ". Kabani impendulo uthola kakhulu ukuthandwa, bazoyithola akhangayo" Nokho, imincintiswano ezinjalo azibona fair ikakhulukazi nethembekile. Kungcono bahlanganyele imincintiswano.
Njengoba ubona, izindlela ukuthola amavoti yokuxhumana "VKontakte" okuningi. Ungakhetha ukuthi ocabanga ukuthi kukhanga kakhulu, bese beqala ukuthatha isinyathelo. Kungcono uyeke nokugenca nokukhwabanisa. Khona-ke ngeke ulahlekelwe ukufinyelela ikhasi wakhe.
Izici and Izinzuzo instagramm.ru
Imininingwana ezeleko sendlela ukusesha "Google" isithombe
Izimpahla eshibhile kusuka abakhiqizi Chinese balinde ku Aliexpress
Yeka ukuthi kuyinto 1 vote "Contact Us". Ngiyithola kanjani ukuvota EC?
Uyini cooker lokungeniswa ngoba uthuthuva okungcono?
Sotuar - ke ... Sotuar izandla siqu: Master Class
Indlela ndizela China kusuka eMoscow? Journey Bruins bamboo
Uma ijubane-Inthanethi lehla
Ubisi lwe-milk. Izakhiwo nezinhlelo zokusebenza
Isitayela Boho-Chic in izingubo futhi ingaphakathi